राप्रपाका अध्यक्ष त्रयलाइ नेता लुइटेलकाे अपिलःसामाजिक संजालमा धोती खोलाखोल नगर्नुहोस् - Ujyaalo Nepal
‘हामी मन्त्री सँगै भयौं, अहिले कोरोनाविरुद्ध सँगै संघर्ष गरिराखेका छौं’-हिसिला
अमेरिकी विदेशमन्त्रीकाे दिल्ली भ्रमणः चीनको आलोचनाकाे वीच भारतको प्रश‌ंसा
संविधानसभा सदस्य चौधरीको निधनमा अध्यक्ष दाहालद्वारा दुःख व्यक्त
राप्रपाका अध्यक्ष त्रयलाइ नेता लुइटेलकाे अपिलःसामाजिक संजालमा धोती खोलाखोल नगर्नुहोस्
By ujyaalo	 Last updated Sep 15, 2020 128
राप्रपाका संस्थापक नेता समेत रहनु भएका सनातन संस्कृति समाज नेपालका सह अध्यक्ष तारनाथ लुइटेलले सहमतिकाे दस्तावेज अनुसार पार्टी एकताकाे बाँकी काम सम्पन्न गर्न पार्टीका तीन अध्यक्षहरूलाइ अपिल गर्नु भएकाे छ । मंगलवार एक अपिल जारी गर्दै नेता लुइटेलले भन्नुभएकाे छः हिन्दु राष्ट्र र संबैधानिक राजसंस्थाको एजेन्डा स्थापित गर्न हामी पार्टीमा लागेका हौं । बालवच्चाहरुको गाँस काटेर पार्टीमा लगानी गरेका हौं । सामाजिक संजालमा आरोप प्रत्यारोप सुन्न कार्यकर्ता तयार छैनन् । तपाईंहरूका कारण राजनैतिक वदनामी खेपी रहेका छौं । तपाईंहरूको आरोप प्रत्यारोप सुन्न लाखौं युवा पछि लागेका होइनन् । ती युवाको भबिष्यको जिम्मा कसले लिन्छ ?
आरोप प्रत्यारोप हेर्दा तपाईंहरू र रत्नपार्कको मुकुन्देमा के फरक रह्यो ? सामाजिक संजालमा धोती खोलाखोल नगर्नुहोस् । सम्हाल्ने ठाउँ छ तर समय छैन ढिलो नगर्नुहोस् । कार्यकर्ता अब धेरै संयमता अपनाउदैनन् । यस्तो गतिविधिले राजसंस्था र हिन्दूवादीलाई ठुलो धोका हुन्छ हुन्छ ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७७, मंगलवार १३:४०
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकाे अन्तर्राष्ट्रिय विभागद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको…
कोरोना संक्रमणबाट थप १४ जनाको निधन,निधन हुनेको संख्या आठ सय ७६